Famahana olana malemy sy lavitra - Jiro MediaLight Bias
Famahana olana malemy sy lavitra
Nanangona ny lisitry ny dingana famahana olana mahazatra indrindra izahay izay mamaha ny olana manjavozavo.
Miala tsiny izahay fa toa somary miharihary ny sasany amin'ireo fanontaniana, fa ny dingana kosa dia tanisaina ho an'ny vahaolana mahomby indrindra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tsy famelana ny switch switch dia ny olana # 1.
Raha tsy mahavaha olana ny iray na maromaro amin'ireto dingana ireto, dia hanafaingana ny fanoloana lavitra sy maivana ho anao izahay.
1) Mihodina ve ny herinaratra?
Raha eny, mba omeo ny jiro mihoatra ny segondra vitsy hamaliana ny fotoana voalohany nirehitra. Indraindray misy fahatarana herinaratra rehefa ampidirina amina fitaovana vaovao ny jiro.
2) Raha toa ka mihazakazaka mandeha amin'ny fahitalavitra / monitor / solosaina ianao, efa mandeha ve ny fitaovana? Fitaovana maro no tsy manome herinaratra rehefa maty ny fitaovana (misy ny manao, ary olana hafa tanteraka izany). Tsy mandeha ny dimmer rehefa tsy misy herinaratra ny seranan-tsambo USB.
3) Mifamatotra ve ny dimmer? Ny "Controller LED" ao anaty kitapo mahazaka mijanona miaraka amin'ny lavitra no maizina. Mila miraikitra. (Antony faha-2 fahita indrindra amin'ny tsy mandeha ny lavitra).
4) Misy tsipika fahitana mazava ve eo anelanelan'ny dimmer? (Efa nahita ity horonantsary ity ve ianao miaraka amin'ny fitarihana fametrahana?)
5) Inona ny loharanom-pahefana ary efa nanandrana nampiasa ilay adaptatera tafiditra ianao? (Ny singa rehetra fa ny Mk2 Eclipse dia misy adaptatera any Etazonia). Raha tsy mandeha amin'ny herin'ny fahitalavitra dia miasa amin'ny adaptatera ve izy? Betsaka ny olana ateraky ny loharanom-pahefana tsy ampy. Fampatsiahivana: ny adiresy haingana (matetika nasiana marika Q miaraka amina tselatra) dia mampihena ny herinaratra (mba hanafainganana ny famahana ny bateria). Izy ireo dia mety hiteraka flickering ary mety hiteraka tsy fetezan'ny remote control rehefa miraikitra.
6) Azafady mba alao antoka fa nanandrana loharanom-pahefana hafa ianao (hafa noho ny monitor, TV, solosaina na adaptatera izay nampiasanao tamin'ny voalohany).
7) Rehefa avy mandeha ny herinaratra ary miditra amin'ny adaptatera dia miandrasa 1 minitra ary avy eo tsindrio ny bokotra on / off 10 heny raha mifandray amin'ilay adapter tafiditra ao. Mihetsika ve ny jiro? Indraindray, maharitra hatramin'ny 3 segondra vao mandeha ny jiro raha vao mampiasa adapter misy. Ity dia antsoina hoe "power up delay" ary mety hitranga rehefa mampiasa ilay adaptatera tafiditra ao, na rehefa mifandray amin'ny fahitalavitrao. Matetika dia amin'ny fotoana ampiasanao azy ireo vao hitranga na raha efa ela ianao no tsy nampiasa azy ireo.
Raha tsy mahavaha ireo olanao amin'ny fanaraha-maso lavitra ireo olana ireo dia mety endasina ny dimmer dia handefa solony isika. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny chat na amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana etsy ambany.
Na izany na tsy izany dia takona mandritra ny 5 taona ny dimmers, koa aza hadino ny mifandray aminay raha mbola misy izany.
Farany, azafady ampahafantaro ahy ny kaonty sy ny adiresinao. Misaotra! Izahay dia manara-maso ireo olana amin'ny alàlan'ny baiko mba hahitana raha misy fironana afaka mampianatra anay ny fomba hamahana olana amin'ny ho avy ary tsy mieritreritra mihitsy izahay hoe nisy olona tsy nifindra hatramin'ny nandidian'izy ireo.